Posted on अप्रील 3, 2010 by nepalkuwait
नेपालको अन्तराष्ट्रिय क्रीकेटमा सबैभन्दा ठूलो साझेदारी १३९ रनको नयाँ किर्तिमान
सिंगापुरले टस जिती पहिला ब्याटिङ रोजेको थियो । सिंगापुरले शानदार शुरुआत गर्दै पहिलो विकेटको लागि ६४ रन जोडेको थिए। सिंगापुर ४९ ओभरमा अल आउट हुँदै नेपालका सामु २१७ रनको लक्ष्य राखेको थियो । नेपालको लागि पहिलो सफलता बसन्त रेग्मीले दिलाएका थिए। सिंगापुरको लागि ओपनर बुद्धिकले ३६ र चेतनले ३२ रन बनाएका थिए भने फिलिप्स ४० , नरेन्देर ७, सगर ८ र मुनिशले ३१ रन बनाएका थिए। सिंगापुरले शानदार शुरुआत गर्दै पहिलो विकेट पुर्व नै ६४ रन जोडेका थिए। सिंगापुर ४९ ओभरमा अल आउट हुँदै नेपालका सामु २१६ रनको लक्ष्य राखेको थियो ।
नेपालका लागि शक्ती गौचनले सर्वाधिक ३ विकेट लिए भने राहुल बि.क. २, बसन्त रेग्मी १, सन्जम रेग्मीले १ विकेट र पारस खड्काले १ विकेट लिए २ खेलाई रन आउट भएका थिए । २१७ रनको लक्ष्यलाई पछ्याउँदै नेपालले सानदार शुरुआत गरेको थियो । नेपाली ओपनर अनिल मण्डल र महेश छेत्रीले नेपालको अन्तराष्ट्रिय क्रीकेटमा सबै भन्दा ठूलो साझेदारी १३९ रनको नयाँ किर्तिमान बनाएका थिए । अनिलले ८३ र महेशले ८७ रन बनाएका थिए । अनिल आउट भएपछी मैदानमा आएका कप्तान पारस सस्तैमा ८ रन बनाएर पेबिलिएन फर्के। पारस रन आउट भएका थिए । सरदर १८ नट आउट, दीपेन्द्रले ९ रन बनाउँदै नेपाललाई विजय गराएका थिए । नेपालले यो लक्ष्य ४३ ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै बनाएको थियो । यो जितसँग नेपाल सेमी फाईनलमा पुग्यो ।
« नेपालको सानदार जित ७ विकेटले सिंगापुर् लाई हरायो नेपालको लगातार तेश्रो जित नेपाल सेमी फाईनलमा पुग्यो Todays Matches »
binod, lalitpu, on अप्रील 3, 2010 at 6:35 अपराह्न said:
very good live coerage, thanks for that. keep it up.